समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि केपी ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य
Sunday, 22 Dec, 2019 10:29 AM
बर्तमान देशको स्थिति
१०४ बर्षे राणा शाशन, ३० बर्षे पंचायती शासन र १२ बर्षको काँग्रेसी शासनले खोक्रो बनेको अबस्थामा २०५२ सालबाट सुरु भएको द्वन्दबाट हाम्रो मुलुक अझै प्रताडित बन्यो । यस्तो पृष्ठभुमीबाट अगाडि बढ्न नसकेको देशमा बिगत डेढ बर्ष अगाडी मुलुकका दुईवटा ठुला कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिलेर चुनाव लड्दा झण्डै २ तिहाईको सरकार बनेको अवस्था छ । त्यसअघि स्थानिय तहमा आ–आप्mनै तरिकाले चुनाव लड्दा पनि तत्कालिन एमालेले धेरै ठाउँमा जितेको अवस्था हो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रलाई मिलाउँदा स्थानिय तहमा पनि झण्डै दुई तिहाईकै संख्यामा नेकपाकै बर्चश्व रहेको अवस्था छ । लामो समयपछि जनताको समृद्धिको सपना पुरा हुने आधार तयार भएको छ । यसले नेकपालाई ठुलो अवसर प्राप्त भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आएको जिम्मेवारी
धेरैले भन्ने गरेका छन् राजा महेन्द्र, बिपी, गिरिजापछि केपी ओलीलाई सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । हुन पनि हो, तलदेखि माथीसम्म जनताको अभिमतको आधारमा हेर्दा अनुकुल अवस्थामा केपी ओलीलाई त्यो अवसर प्राप्त भएको छ, वा उहाँले देशको सर्वोच्च कार्यकारी जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु भएको छ । अहिले केपी ओलीको दृढ ईच्छा शक्ति र ईमान्दारिताका कारण मुलुकलाई कायापलट गर्न कति पनि समय लाग्ने स्थिति होईन । तर केपी ओलीलाई अवसरमात्र छैन, चुनौतीपनि त्यत्तिकै छन् । जनताका असिमित आकांक्षाहरु र बिग्रेको देशको अवस्था अनि सिमित श्रोत साधनहरुको बीचमा कसरी तादाम्यता मिलाउने हो । यो एउटा गम्भिर बिषय भएको छ ।
नेकपा, प्रधानमन्त्री ओली र थप चुनौती
त्यो अवसर केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको भए पनि त्यो त सिंगो नेकपाको अवसरको रुपमा लिनै पर्दछ । आम निर्वाचन अघि तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धनका साथ संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरेर आ–आप्mनै चुनाव चिन्हमा चुनाव लडेको र अहिले आएर दुई पार्टीहरु एक भैसकेपछि त्यो जिम्मेवारी नेकपाको काँधमा आएको छ । समृद्धिको खाका कोर्दै समाजवादको आधार तयार गर्ने काममा यो सरकार लागि सकेको भए पनि पुरानै राज्य संयन्त्र, बिग्रिएको कर्मचारी मनोवृती, देशी बिदेशी प्रतिकृयावादीहरुको घेराबन्दी आदि कारणले यो सरकारका अगाडी माथी उल्लेखित बाहेक अन्य ठुला ठुला चुनौतीहरु पनि त्यत्तिकै तेर्सिएका छन् ।
अध्यक्ष क.प्रचण्डको भुमिका
पार्टी निर्माण वा सरकार ठिक ढंगले अगाडी बढाउनको लागि नेकपाका शिर्ष नेतृत्वहरु सबैको अहम भुमिका त छँदैछ । तर नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अलग गरेर यो सरकार वा पार्टी सफल वा असफल हुने कुरालाई हेर्न कदापी मिल्दैन । यति बेला मुलुकका मात्र होईन संसारकै प्रतिकृयावादी पुंजिवादपंथीहरु केपी ओलीको बिरुद्घमा मात्र होईन कमरेड प्रचण्डका बिरुद्घमा पनि त्यत्तिकै लागेका छन् । अझै प्रचण्ड कमरेडका बिरुद्घमा त हिजो द्वन्दकालका चहर्याई रहेका घाउहरुलाई कोट्टयाउने र प्रहार गर्ने गरेका छन् । यसलाई हामीहरुले अनदेखा गर्ने वा अझ आगोमा ध्यु थप्ने काम गर्ने जस्तो गल्ति गर्नु हुन्न । कतिपय भिषण युद्घ वा द्वन्दबाट गुज्रिएका मुलुकहरुमा जव शान्ती स्थापना हुन्छ र सिंगो देशले बिकासको फड्को मार्छ, साथै देश अग्रगमन तर्फ अगाडि बढ्छ ति हिजोका द्घन्दका घाउहरुमा पनि बिस्तारै आफै मल्हमपट्टी लाग्दै जान्छ ।
यस्ता कुराहरु हामीले आम जनताहरुलाई बुझाउन सक्नु पर्दछ । द्वन्दबाट घटित बिभिन्न घट्ना परिघट्नाहरुमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मात्र गल्ति देख्ने दोषी चस्मालाई उतार्न सकेनौं भने हामीले इतिहासमा व्यक्तिको सही मुल्यांकन गर्न सक्दैनौं । जसले यत्रो युद्घको नेतृत्व मात्र गरेन सेना समायोजन अनि शान्ति प्रकृयामा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नुको साथै पार्टी एकिकरणसम्म गर्ने सहास गर्यो, उसबाट हिजो इतिहासमा केही गल्ति भएका थिए भने पनि आज जनताको नजरमा त्यो क्षम्य हनुपर्दछ । आज मुलुकले मागेको कुरा इतिहासका कुराहरुमा अल्झने होईन इतिहासबाट त शिक्षा लिएर अगाडी बढ्ने पो हो त ! कतिपयले हिजो द्वन्दकालमा १७ हजार मान्छे मारिएको घटनाको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? भनेर प्रचण्ड तर्फ प्रश्न तेस्र्याउंछन । त्यसको जवाफ एक्लो प्रचण्ड वा त्यति बेलाको माओवादीलाई मात्र दिन मिल्दैन् । जतिबेला बृहत शान्ति सम्झौतामा दलहरु बीचमा सम्झौता भयो त्यति बेलै सबैले आ–आप्mनो गल्ति सेयर गरी सकेको अवस्था हो भनेर हामीले बुभ्mनु पर्दछ । त्यो सवाल अहिले उठ्छ भने त्यसको जवाफ सबैले दिनु पर्दछ ।
आज मुलुकले मागेको कुरा इतिहासका कुराहरुमा अल्झने होईन इतिहासबाट त शिक्षा लिएर अगाडी बढ्ने पो हो त !
हामी उहिल्यै एउटा गित गाउंथ्यौं “मर्ने पर्छ एकदिन सबैले हामी पनि मर्छौं, हामी मर्दा जनताको शिर उठाई मर्छौं”–सवाल चाँहि यहाँनिर छ, की अहिलेका हाम्रा कामहरुले जनताको शिर उठाई रहेका छौं की छैनौं ? मेरो यो प्रश्न सरकार चलाउनेहरु, पार्टी सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरु सबैका लागि हो र म आंफैका लागि पनि होे, अनि हामी सम्बन्धित सबैलाई....। यति भनि रहदा मलाई चिन्नु हुने साथीहरुले एउटा लेखकको लेखकिय आँखाले हेरिदिनु होला । मैले पनि स्वतन्त्र लेखकको दृष्टिबाट प्रश्नसम्म तेस्र्याउने अधिकार राख्न सक्छु भन्ने लाग्दछ । तर यो प्रश्न अनुत्तरित भने अवश्य छैन । यसको उत्तर हामीले आप्mना काम र व्यवहारबाट दिन सक्नु पर्दछ । कुरा यति मात्र हो ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र बाह्य प्रतिकृया
यतिबेला प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्यको बिषयलाई अतिरञ्जित र पेचिँदो गरी उछालिएको छ । क.ओलीको स्वासथ्यको बिषय अहिलेको होईन २०३२ सालदेखि नै उहाँ जेलमा हुँदा वा अझै अगाडिदेखिको कुरा हो भनेर उहाँंका समकालिन साथीहरुले नै भनिरहनु भएको छ । पछिल्लो समय उहाँको मृगौलामा समस्या आएर मृगौला प्रत्यारोपण गरेको कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । त्यो मृगौलाले काम गरेन भने पनि चिकित्सा बिज्ञानले यत्रो फड्को मारिरहेको जमानामा डाईलासिश गर्ने, दोश्रो तेश्रो पटक पनि फेर्न सकिने वा थप प्रत्यारोपण गर्न सकिने भनेर बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुले भनिरहनु भएको छ भने यत्रो कोकोहालो गर्नु पर्ने किन ? यस बीचमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको बारेमा ब्रेकिङ्ग न्युज, फिचर न्युज, बिभिन्न अनलाईन, प्रिन्ट मिडिया र ईलेक्ट्रोनिक मिडियाहरुबाट धाराप्रवाह समाचारहरु आइरहेका छन् । उहाँको स्वास्थ्यको बारेमा कतिपय व्यक्तिहरुका लेख रचनाहरु आई नै रहेका छन् ।
कतिपय बिचारहरु देशको चिन्ता व्यक्त गर्दै अत्यन्त सकारात्मक सहृदयी, मानवियताबाट ओतप्रोत भएर पनि आएका छन् । आम सर्वसाधारण र बिभिन्न संचारमाध्यमहरु तथा बाहिरी मिडियाहरुमा अनेक शिर्षकहरुमा समाचार छापिएका छन्– मृत्युलाई ह्याकुलाले जित्ने ओली, प्रधानमन्त्री ओलीको जिवन रहस्य बिछट्टको असिम ईच्छाशक्ति, केपी ओलीको दृढ आत्म बिश्वास र देश प्रेम आदी आदि...। कुनै पनि व्यक्ति बिरामी भएको बेला आएका यस्ता बिचारहरुले अवश्य नै उक्त बिरामीको रोगलाई परास्त गर्ने सवालमा आत्मबल प्रदान गर्दछ । यस्ता कुराहरु आउँदा केपी ओलीलाई अतिरंजित पाराले हौस्याएको भन्न मिल्दैन । तर कतिपय प्रतिकृयाहरु अमानविय, सम्वेदनहिन र निकृष्ट विचारबाट ग्रसित भएर आएका छन् । त्यस्ता कुराहरु हेर्दा यो धर्तीमा मानिसहरु कति निर्दयी तथा मानव सम्वेदनहिन हुंदा रहेछन् भन्ने लाग्दछ । तिनिहरुको लेखन अनि बोलीको स्तर हेर्दा टिठ लागेर आउछ । तर के गर्नु र यो सुन्दर धर्तिमा त्यस्ता ...मान्छेहरुले पनि जन्म लिएका छन् । हामी भौतिकवादी ईश्वर भगवान जस्ता कुराहरुलाई विश्वास गर्दैनौं । यदि भगवान नै हुँदा हुन् भने पनि हे भगवान ! तिमीले यो दुनियाँंमा कस्ता कस्ता मान्छेलाई जन्म दियौ, भन्न मन लाग्छ । बस् ! तिनिहरुको बारेमा यति नै भन्दा पुग्छ होला । तिनिहरुको लागि यो भन्दा बडी शब्दहरु खर्चनु पनि व्यर्थ हुन जान्छ किनभने तिनिहरुको एक मात्र लक्ष्य देशको कायापलट गर्छु भनेर आँधिबेहरी झैं अगाडी बढिरहेको एक योद्घाको मनोवल गिराउनु रहेको छ भन्ने कुरा दिउसोको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
यसै सवालमा कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झट्ट हेर्दा राम्रै सुझाव दिए जस्तो तर साँच्चो अर्थमा व्यंग्य लाग्ने बिचार पनि दिई रहेको पाईन्छ । उनिहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बिश्राम गरेर उपचारमा ध्यान दिन सुझाएका छन् । यो सुझाव खासगरी बिपक्षीहरुबाट आएको छ । उनिहरुलाई धन्यबाद दिंदै यति नै भन्न सकिन्छ, प्रम ओली उपचार पछि पुर्ण रुपले भिजन र सोचका साथ काम गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । उपचारपछि काम र जरुरी पर्दा फेरी उपचार, यो निरन्तर चलिरहन्छ । बिश्रामले रोग बढाउँछ , कामले उत्साह ल्याउंदै मनोबल बढाउँछ । यत्ति चैं उहाँंहरुले पनि बुभ्mनु जरुरी छ । तपाईहरु चिन्ता नलिनुहोस् । प्रधानमन्त्रीले आप्mनो स्वास्थ्य र अन्य कुराहरुलाई सन्तुलन मिलाएर कामगर्न राम्ररी जान्नु हुन्छ । फेरी केपी ओलीको ठाउँमा अरु कोही आउँदा पनि तपाई बिपक्षी साथीहरुलाई के फाईदा होला र ? किनभने प्रधानमन्त्री भएर आउने त नेकपाकै अर्को कोही नेता होईन र ? त्यसैले यो व्यर्थको परिकल्पनाबाट मुक्त हुनुमा नै बिपक्षी साथीहरुको लागी श्रेयस्कर होला ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारको कुरा र देशको भविश्य
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै स्वास्थ्य स्थितिपनि ख्याल नगरी निर्वाचनमा देशव्यापी दौडाहा गरेर वामपन्थी गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिलाउन नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाहा गर्नुभयो । जनतालाई देशको समृृद्घिको सपना देखाउनुभयो र तिनीहरुलाई पुरा गर्ने भिजन ल्याउनुभयो । तिनिहरुलाई लक्ष्यसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी पनि उहाँंकै हो । त्यसैले उहाँको स्वास्थ्य उपचारको कुरा देशको समृद्घि र यो मुलुकको भविश्यसँग अभिन्न रुपले गासिएको हुँदा यसमा सिंगो पार्टी र राज्यले पनि गम्भिरतापुर्वक ध्यान दिनुपर्दछ र ध्यान दिईरहेको पनि छ । उहाँंका निजी चिकित्सकलगायत देशका बिभिन्न बिशेषज्ञ डाक्टरहरुसंग नियमित परामर्श भईरहेको भन्ने सुनिएको छ । त्यो जरुरी पनि छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यु ! आफ्नै स्वास्थ्य भित्र उत्पन्न चुनौती र बाह्य सबै खाले चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै उच्च मनोबलका साथ तपाई अगाडी बढ्नु होस् करोडौंं नेपालीहरु तपाईको साथमा छन् ।